राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले गरे प्रगति, कुनको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं : पछिल्लो समय विकास बैंकहरु मर्ज तथा एक्विजिसनमा जानेक्रम बढ्दो छ । यही कारण विकास बैंकको संख्या घटिरहेको छ । हाल १० राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक नेप्सेमा सूचीकृत रहेका छन् । यीमध्ये पनि केहीले वाणिज्य बैंकसँग एक्विजिसनमा जान सम्झौता गरिसकेका छन् । यसैबीच १० राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश कम्पनीको नाफा लगायतका प्रमुख सूचकमा सुधार आएको छ । केहीको भने नाफा ह्रास भएको छ । कोरोना संक्रमण तथा लक डाउनको प्रभाव विकास बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा पनि पर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । हेरौं, कुन विकास बैंकको अवस्था कस्तो ?
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ८ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी बढेको छ । २ बैंकको पुँजी गत वर्षकै यथावत रहेको छ । गत वर्षकै पुँजी यथावत हुनेमा सांगिला डेभलपमेन्ट र गण्डकी विकास बैंक रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै पुँजी बढाउनेमा भने शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक परेको छ । यसको चुक्ता पुँजी ५५.४७% ले बढेर २ अर्ब ५२लाख २९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबैभन्दा धेरै पुँजी मुक्तिनाथ विकास बैंकको छ । यस बैंकको पुँजी ४१.११% ले बढेर ४ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । विकास बैंकहरुमध्ये केहीले मर्ज तथा एक्विजिसन अनि कतिपयले हकप्रद तथा बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी बढाएका हुन् ।
७ बैंकको जगेडा कोष बढ्यो
चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ७ विकास बैंकको जगेडा कोष बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढ्नेमा शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट रहेको छ । यसको जगेडा कोष ११८.४४% ले बढेर १ अर्ब ४० करोड ३२ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यता, जगेडा कोषमा सबैभन्दा धेरै रकम महालक्ष्मी विकास बैंकको कोषमा रहेको छ । यसको जगेडा कोष २९.१९% ले बढेर १ अर्ब ६६ करोड २० लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जगेडा कोष घट्नेमा मुक्तिनाथ, देवः र कामना सेवा विकास बैंक रहेका छन्् ।
१० वटैको खुद ब्याज आम्दानी बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा १० वटै बैंकको खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ । सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी बढ्नेमा शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक छ । यसको खुद ब्याज आम्दानी ६२.९३% ले बढेर १ अर्ब ४ करोड २४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअवधिमा रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी कमाउनेमा भने मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ । यसको ब्याज आम्दानी २४.४३% ले बढेर १ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
७ को खुद नाफा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ७ विकास बैंकले नाफा बढाएका छन् । सबैभन्दा धेरै नाफा बढाउनेमा शाइन रेसुंंगा डेभलपमेन्ट रहेको छ । यसको नाफा ४०.४८% ले बढेर ४३ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यता, सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक परेको छ । यसको नाफा ८.०६% ले बढेर ६७ करोड ६० लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाफा घट्नेमा देवः विकास, सांग्रिला डेभलपमेन्ट र गण्डकी विकास बैंक रहेका छन् ।
३ को मात्रै प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो
चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ३ विकास बैंकको मात्र प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी बढ्नेमा मुक्तिनाथ, ज्योति र कामना सेवा विकास बैंक रहेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी भने शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको २२ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ । ७ बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्षको यसैअवधिको तुलनामा घटेको छ ।